Zvinyorwa: Ukrainian Airlines yaivimba neLufthansa nedzimwe ndege pamberi pekubvisa PS752 yekutakura muTehran.
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Zvinyorwa: Ukrainian Airlines yaivimba neLufthansa nedzimwe ndege pamberi pekubvisa PS752 yekutakura muTehran.
Airlines • nhandare yendege • Austria Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Iran Kuputsa Nhau • nhau • Qatar Kuputsa Nhau • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • Technology • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau • Ukraine Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
36 min kuverenga
Ukrainian Airlines yakasimbisa: PS752 yakajekeswa kuti itore muTeheran muna Ndira 8, nekuti Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Qatar Airways, neAeroflot dzakasimuka kubva kuTeheran pamwe nekukomberedza nguva imwecheteyo seUkraine International ndege PS752 yaifanirwa kuenda Kyiv.
Mune chirevo chakawanikwa na eTurboNews, Ukraine International Airlines dzakabvuma kuti dzakatevera dzimwe ndege. Izvi zvakataurwa pamusangano wenhau waJanuary 11 muKyiv. "Ndege dzinobva kumativi ese epasi dzakabhururuka ipapo pamberi pedu uye dziri kubhururuka ipapo shure kwedu. Nehurombo, isu tinogona kutaura kuti ndege yedu yaive munzvimbo isiri iyo panguva isiriyo. Iyi inogona kunge iri imwe ndege yanga ichishanda panguva iyoyo kunhandare yendege yeTehran. ”
eTurboNews inonzi yakadaro vamwe vatakuri vanofanirwawo kuitiswa basa yekudonha uye yekuisa ivo pachavo vafambi munjodzi huru.
Zvakare nhasi mukuru wezve ndege weIran asimbisa zviri pamutemo kuti makomba maviri akapfura pasi ndege yeUkraine International Airlines kutanga kwemwedzi uno ichiuraya munhu wese ari muchikepe.
pashure eTurboNews yakaburitswa chinyorwa chanezuro panjodzi yekumirira kirasi-chiito mhosva muCanada, Ukrainian Airlines vakapindura nechinyorwa chavo chaJanuary 11 venhau-musangano.
eTurboNews iri kutsikisa ichi chinyorwa pasina kugadzirisa uye pasina zvirevo:
“Ini ndiri Yevhenii Dykhne, Mutungamiri weUkraine International Airlines (UIA). Ndinodada nechinzvimbo changu, ndinodada nenzvimbo yemutungamiriri wekambani, iyo, kwemakore makumi maviri nemanomwe, yagara ichifunga nezvekuchengetedzeka kwevafambi vendege kwakanyanya kukoshesa.
“Kubva pakutanga chaipo, taive nechokwadi chekuti pakanga pasina mhosho yekutyaira kana kusashanda kwehunyanzvi nendege kuburikidza nekanganiso yekambani; takazviongorora tichipesana nemitemo yese yemukati, takazviongorora tikazogutsikana kuti panofanirwa kunge paine chinhu chekunze. "Patakaronga musangano wenhau nhasi, taive nehurongwa hwakasiyana. Taida kukuudza kuti awa matatu mazuva ano ave achitiitira sei. Muchokwadi, mazuva matatu chete anga ari edu, ini handizive, senge mavhiki matatu kana mwedzi mitatu - zviitiko zvakawanda kudaro, mutoro wakadai kune mumwe nemumwe wevashandi vematambudziko vakaronga basa nehama dzevafi vafambi, ne mhuri dzevashandi vedu vanodiwa.
“Asi mangwanani ano, meseji kubva kuTehran yashandura hurongwa hwedu. Ini ndinogona kutaura kuti taiziva kuti izvi zvaizoitika, asi isu takazorodzwa nekuwana ruzivo rwanhasi, sezvo rwuchisanganisira chero fungidziro yekuti kambani yakanga yaita chero chinhu chisina kunaka panochengetedzwa. Isu taive uye tiri yakachengeteka kambani, yakavimbika kambani ine yakanyanya, ini handityi kutaura, vashandi vanokwanisa muUkraine uye neyedu - izvo zvisingawanzo kuitika muUkraine - neyedu yehunyanzvi nzvimbo pano kuBoryspil Airport . Tine mukana wese wekuchengetedza kwedu kwakanyanya kukosha - kuchengetedzeka.
“Mukati memazuva matatu aya, muzinda wekambani inoona nezvematambudziko waita basa rakawanda. Basa riri kuenderera mberi munyika dzine vafambi vaive mungarava medu. MuCanada, nzvimbo yatove kumusoro uye iri kushanda kuti ishandire pamwe nehama dzevakabatwa. MuIran, nzvimbo yakakosha yakagadzwa pahofisi inomiririra yekudyidzana nemhuri dzeavo vakaurayiwa mutsaona. Hotline yakatangwa, iyo iri kutoshandiswa nehama - vekuEurope nevaUkraine. Iyo kambani irikushanda zvakasiyana nehama dzevashandi vedu.
"Zvakadaro, ndinotenda kuti tichifunga nezvechirongwa chitsva, tinofanira kugadzirisa mubvunzo watinowanzobvunzwa: sei ndege yakashanda nendege kuenda kuTehran?
Nei ndege yendege isina kumisa mashandiro ayo?
Ndinoda kutaura kuti, maererano nemashandiro ayo, zviri pachena uye zvinonzwisisika kwatiri sevashandi vevashandi vezvekufambisa ndege, hazviwanzo kujekerwa kune veruzhinji. Civil avhiyesheni nendege dzinoitwa zvichibva pamvumo dzinopihwa nenyika mbiri: iyo inoitiswa nendege, nzvimbo yacho inowanzo tongwa nemahurumende ehurumende, nendege services, uye nehurumende yekufambisa ndege yenyika iri pasi pemureza wayo ndege inoshandisa ndege dzayo.
"Panguva iyo ndege yacho yakasiya Boryspil Airport, ndege iyi yanga isina ruzivo nezve zvingangotyisidzira.
Payakasiya Tehran airport, chaizvo chinhu chimwe chete uye nendege yanga isina ruzivo, uye hapana sarudzo kubva kune manejimendi manejimendi yakaunzwa kwatiri. "Semuenzaniso, panguva yekunetsana pakati peIndia nePakistan, Pakistan Civil Aviation Authority yakazivisa kumisa kwendege kunhandare yendege yePakistan. Pamusoro pezvo, nendege dzese dziri pasi rose dzinoteerera izvi zvinodiwa nepese pavanogona napo. Kune yakasimbiswa yepasirese mitemo yekuzvibata mumunda wevamiriri vevateereri, mashandiro anoita ndege.
“Ndinoda kushandisa ruzhinji rwakakura rwevateereri vemunyika yose kupa ruregerero rwakadzama pachinzvimbo cheUIA Airlines uye pachangu pachangu kune vese vafambi nehama dzese dzevatakuri vari mundege yedu, vari pasi rese. Hatisati tasangana nemunhu wese
. Yedu yakadzika kunyaradza. Tiri kunzwa kusuruvara kwakadzama pamwe nehama dzevatakuri vedu uye hama dzevashandi vedu, vashandi vedu vanodiwa.
“Ndinoda kuti Mutevedzeri weMutungamiri wenhandare yendege kuti aende kuFlight Operations kuti ataure pamusoro pemashoko angu nezviri kuitwa nendege panguva yange ichisimuka panhandare yendege yeTehran.
Izvi ndezvei? Izvo zvine chekuita nenyaya yekuti izvozvi, kunyangwe muchirevo chakaburitswa neIran pachayo, tinoona mazano ekuti vashandi vedu vakazvimiririra uye neimwe nzira kwete nenzira yaingave yakamboita. Ndokumbirawo, Ihor, tiudzei kuti chii chaiitika mudenga pamusoro peTehran airport kare, panguva uye mushure mekubhururuka, uye maitiro evashandi vedu - zvakakosha. "
Ihor Sosnovsky: “Maswera sei masikati! Ihor Sosnovsky, zvakare, Mutevedzeri weMutungamiri weUkraine International Airlines. Ndave ndichishanda kuUIA kwemakore makumi maviri nemanomwe, vanopfuura makumi maviri vavo vanoona nezvekufambisa ndege. Ndanga ndichishandira UIA kubvira zuva rekutanga, ndinodada nazvo.
“Kambani iyi ine nhoroondo yakanaka kwazvo yezvekuchengetedza kubvira muna Mbudzi 1992. Tiri kuita nepatinogona napo kuona izvi maererano nehunyanzvi hwevanhu, kuchengetedzeka kwavo uye kugadzirwa kwemamiriro ezvinhu anofadza uye akanaka kushanda. Mashoko makuru - vanhu vanoita mutsauko - anotonyanya kukosha mundege pachayo; ivo vanotora pane imwe chirevo, yakajeka zvikuru uye, mune yemutekenyi, kunyanya, yakajeka.
“Saka ndingade kuti unzwe zvakare mazita evanhu vanga vari muchikepe cheFlight 752: Captain Volodymyr Gaponenko ane 11,600 12,000 maawa ekubhururuka, Oleksiy Naumkin - murairidzi / murayiridzi mutyairi wendege, maawa zviuru gumi nezviviri zvekufamba nendege, uye co-mutyairi Serhii Khomenko, aive nemaawa mazana manomwe nemazana matanhatu enguva yekubhururuka.
"Vashandi vendege vaive mungarava vanosanganisira Kateryna Statnik, anga achibhururuka neUIA kwemakore matanhatu nehafu, Valeriia Ovcharuk - makore matatu nemwedzi misere, Ihor Matkov akapa makore gumi nechidimbu kuUIA. Akange abudirira kupasa makwikwi kuti ave mutyairi wendege uye aifanirwa kutora kosi yekudzidzira mukati megore. Zvino kwaive naJuliia Solohub - gore rimwe nemwedzi misere, Mariia Mykytiuk - makore maviri nemwedzi misere, Denys Lykhno - gore rimwe nemwedzi minomwe.
Ini ndanyora aya manhamba uye zviuru zvemaawa ekubhururuka kuti iwe unzwisise kuti vanhu ava vanga vaita mazana ekutora nekumhara gore rega rega, kusanganisira paTehran airport, uko ndege dzeUIA dzave kubhururuka kashanu pavhiki kweanopfuura makore mashanu. "
Saka kutiza pazuva iri kwaisave chinhu chitsva kuvashandi veUIA. Yakanga iri yakajairika, yekujairika kutiza kubva kuTehran kuenda kuKyiv. Vanhu vakauya mundege, vakaigadzirira, vakagamuchira mvumo yekutanga injini, vakatakura kubva kunhandare yendege zvinoenderana nemvumo yemutyairi wemotokari; mushure mekusimuka, vakaenda pamhepo, zvichipesana nezvakataurwa nevaIran - kuti havana kusangana.
Vakaenda pamhepo, vakashumwa 'Tora!' nezwi rakadzikama zvachose, akagamuchira imwe mvumo yekuenda nendege uye akaramba achinyatsoenderana nemvumo yemutyairi wemotokari.
"Munguva yedu yeruzivo, ndinofunga, zvakanaka, zvakatove kupusa kuyedza kuviga chimwe chinhu saka, kana iwe ukavhura nharembozha dzako ikozvino, vhura iyo radar yekushandisa, unogona kuona nzvimbo, kune yechipiri, yendege yega yega unoda. Kazhinji, iwe kana isu hatidi aya marekodhi e data emuchadenga kana marekodhi ezwi rejongwe isu takamirira.
Pasi, pakaramba paine kutaurirana nevemhepo traffic control sevhisi, iyo yaive ichitungamira vashandi, iyo inogona kuratidza nekuratidza kururamisa kwezviito zvevashandi asi iyo Flight Radar maapplication anoratidza zvese zvaiitika panguva yekufamba.
Ndokumbirawo kuti muise masiraidhi mashoma? “Siraidhi iyi inoratidza kusimuka kubva kuTehran airport nendege dzakasiyana pazuva ratakasimuka. Mitsetse yebhuruu ndisu. Iyi ndiyo ndege yeQatar yakatendeuka kurudyi, iyi ndege yeKK. Ticharatidza zvino dzese nendege dzakaitwa musi uyu tisati tasimuka.
Cherekedza kuti ndege iri chaizvo pamutsetse wenzira, ichibva yatanga kutendeuka kurudyi, uye mushure meizvozvo, takaonekana nayo. Ndiwo maratidziro edzimwe ndege dzese kubva kuTehran airport musi iwoyo. “Ndingawanawo here slide rinotevera, ndapota?
Izvi, sekuziva kwedu, PS 752 kubva kubva 2 Mbudzi kusvika 8 Ndira. Iyi ndidzo ndege dzese, nendege yedu, yatakaita kubvira ipapo. Iwo matsvuku anoratidzira kufamba kwendege yedu uye pakanga pasina nzira yekutsauka iyo ingangofungidzirwa.
“Ndingawanawo here slide rinotevera, ndapota? Nezve kukwirira kwendege. Aya ndiwo maratidziro enhandare dzendege, ndege dzakakwirira. Mune tsvuku, tinoona kutiza kwedu 752 zvakare kwe 8 Ndira. Ndokumbira utarise kuti iwe haudi huchenjeri hwakawanda kuti ugadzire aya masiraidhi: iyi ndiyo yakajairika Flight Radar app, iyo yaunogona kuvhura wobva watarisa mazwi angu ese kune wechipiri.
“Ndingawanawo here slide rinotevera, ndapota? Iyi ndiyo tafura yendege dzakaitwa zuva iro pamberi pedu. Ukatarisa mazita nenhamba dzendege, nguva dzadzo dzekuenda, ndokumbira utarise - takasimuka na2: 42, Qatar yakasimuka na2: 09 pamberi pedu. [00:15:22 Vhidhiyo yakavhiringidzwa kwemasekonzi mashoma]….
[00:15:37]… zvine chekuita nekudzima kwendege, kana kupfura nematoyi kudivi, chero kupi. Vatyairi vezvikepe vaisaziva, havaigona kuziva nekuti pakanga pasina yambiro. Nhandare yakanga ichishanda zvakajairika; harisi iro bhizinesi revatyairi vezvikepe kuti vazive kuti ndiani aipfura, kubva kupi uye kupi zvinangwa.
“Uye imwe slide. Iyi ndiyo tafura yendege shure kwedu. Awa imwe nemaminitsi makumi mana gare gare, uye awa rimwe nemaminetsi makumi matatu nemasere mushure medu, makambani maviri eIran akasimuka uye ipapo nhandare yakaramba ichishanda zvakajairika, sekunge pasina chakaitika.
“Saka, kupedza hurukuro yese iyi, ndaisada kutaura zvinonzwika zvachose asi ndinotofanira kuzvitaura. Ndinoda kutaura kuti ndinobatana neMutungamiriri wenyika yedu, VaZelensky, mukukumbira kuti vakuru veIran vanyatsoziva zvakaitika, pasina chero 'asi', 'mamiriro' uye zvichingodaro… sezvo vachifanira kutora mutoro uzere. pane zvakaitika kuvanhu vedu, kukudzwa kwese kwavari, hunyanzvi hwavo uye mhando.
[00:17:56 - murairidzi muUkraine anokoka vatapi venhau kuti vabvunze mibvunzo uye vanotsanangura maitiro acho [00:18:48 - mubvunzo kubva kumutori wenhau:]
“Mr. Dykhne, muripo upi unotarisirwa neUkraine? Zvimwe zvimwe zvataurwa zvataurwa? Uye zvakare, VaSosnovsky - Iran yaiziva nezvekuwedzera kwekukonana kwemauto. Sei isina kuvhara matenga ayo? Unofungei? Sei vasina kudaro? Vaizofanira kubhadhara imwe muripo, chirango here? Inyaya yemari here kana kuti vakaita sarudzo yekushamisira vachiziva nezvekuwedzera? Unoona sei zvakaitika? Ndatenda."
[00:18:27 - Dykhne:] "Ndatenda nemubvunzo wako. Isu ikozvino, sekambani, tiri kuita zvinomanikidzwa kuita zviri pamutemo pamusoro pekugadzirisa mhedzisiro yenjodzi iyi. Naizvozvo, zvinosuruvarisa, handikwanise kutaura pamusoro pezvinotarisirwa muripo, pane inishuwarenzi kubhadhara kune vanofamba.
Zvese zvandinoziva ndezvekuti tiri kushanda pazvinhu zvakawanda nematare manomwe, uye kufambira mberi kwezvese zviitiko zvedu zviri pamutemo zvichafukidzwa munguva yakafanira. Izvozvi hapana chandingakuudza nezvazvo, ndine urombo. ”
[00:20:50 - Dykhne:] "Ndine chokwadi chekuti njodzi iyi haizokanganisa mashandiro enhandare yendege. Iyo kambani ichave ichishanda senguva dzose. Tichatarisana nematambudziko ezveupfumi anokonzerwa nenjodzi iyi; takaongorora izvi uye tinoziva kuti ichokwadi.
Ndokusaka ndine chivimbo chekuti nzira refu yatinofanira kufamba ichatanga kufambiswa nevanhu vakapihwa kunzvimbo yedambudziko kuitira kuti isakanganisa basa renguva dzose rekambani. Chechipiri, ndine chokwadi chekuti rechisere raNdira richachinja zvakanyanya mukambani.
Ticharamba tichirarama nemutoro wedambudziko iri. Hatife takakwanisa kushandura zvakaitika, shandura manzwiro atinoita nezvazvo. Ndokusaka ndine chokwadi chekuti tichasimba mupfungwa uye tichakoshesa nekuda vashandi vavo zvakanyanya kupfuura nakare. ”
“Pamubvunzo wako, ndinofunga pane hurongwa hwekuchengetedza njodzi mukambani iyi, kureva kuti, kutaura zviri nyore, ndege yakachengeteka ndiyo inomira pane kubhururuka, uye mutyairi akachengeteka ndiye anogara mukicheni make.
Naizvozvo, kuti ndege dzibhururuke, unofanirwa kuzvishandisa, uye ivo vachabhururuka zvakadaro, sezvo tichifanira kuwana mari uye kuwana purofiti: mushure mezvose, isu tiri kambani yekutengesa. Asi iyi sisitimu inokutendera iwe kuti usarudze kwausingafanire kubhururuka zvachose. Ndokunge, kana tiri munzvimbo dzvuku, zvirokwazvo hatizobhururukireko. ”
Ndizvozvo. Kwete, isu tine zvinhu zvakanaka izvozvi, nhasi. Panyaya yekudzidziswa kwevashandi, ndinogona kutaura izvozvi kuti kwete chete isu hatisi kuzochinja chero chinhu asi isu tichaedza kuramba tichiita zvatiri kuita. Panyaya yekuona kwekubhururuka.
Iyi ihurongwa hwakazara hwakabatanidzwa, uhwo hunogadziriswa nekambani seyakazara, kusanganisira kuchengetedzeka, vashandi vepasi, vashandi vehunyanzvi, vashandi veendege hazvisi nyore, saka hapana chatichachinja. Ticharamba tichiita zvatiri kuita. ”
“Izvi zvaive zviri nyore kunonoka mamiriro. Paive nemutoro wakakura kwazvo uye nemikwende yekutakura pane iyi ndege. Naizvozvo, mukuru wendege, aona kurera kwendege uye achiona kusawirirana, akaita danho rekuburitsa imwe nhumbi kubva mumakamuri enhumbi. Ndicho chikonzero nei ndege yakanonoka. ”
“Tarisa, hatigone kuburitsa ruzivo nezvevanhu vasina kukwira ndege izvozvi. Nekuti parizvino iri kushandiswa kune zvimwe zviitiko zviri pamutemo zvinoitwa nevamiriri vemitemo vari kuongorora dzidziso dzekuparara. Izvo zvakataurwa neIran nhasi - isu hatisati tine humbowo hwechinyorwa zvacho. Iyo vhezheni yekurwisa kwemagandanga ichiri kuongororwa nevemitemo uye isu tiri kusangana navo, tichipa ruzivo rwakakodzera, zvirevo nezve zvakaitika, vafambi vaibhururuka nguva uye kubva kupi, pavakabhururuka kuenda kuTehran, nesu kana kwete nesu, nei vasina kukwira nendege: ruzivo rwese rwatinarwo, takapa kune vezvemutemo, saka hatina kodzero yekutaura nezvazvo panguva ino. Kana vhezheni iyi ikarambwa nevamiriri vemitemo sekusashanda, ruzivo urwu runonyatso kuwanikwa. ”
[00:26:05 - mubvunzo kubva kumutori wenhau:] "
Ungada here kutiudza isu kuti ndeipi meseji yekupedzisira yaive kubva kune vatyairi kuenda kusevhisi services? Pamusoro pezvo, wakanyatsodzidza riini kuti iri raisave dambudziko rehunyanzvi, zvirokwazvo kwete chikanganiso chevashandi, nekuti iwe ungadai wakagamuchira ruzivo Iran isati yaburitsa chirevo chayo uye pamwe Mutungamiriri weCanada Justin Trudeau asati aburitsa chirevo chake? Ndatenda."
[00:26:13 - Dykhne:] "Tine nyanzvi dzakakomba uye dzinokwanisa mukambani medu (tiri kambani hombe). Naizvozvo, zvakasikwa, isu takateedzera mamiriro acho pachedu, chero sarudzo ingadai yakaitika. Kwatiri pachedu, isu takagumisa kuti, kutanga; zvirokwazvo paive nechinhu chekunze. Kuongorora kwedu kwakabvisa zvimwe zvese zvingangodaro zviitiko.
Naizvozvo, taive nechokwadi kubva pakutanga. “Pane chirevo chekuti paive pasina kutaurirana nendege. Kusvikira tadzidza kubva kunhengo dzekomisheni yekuferefeta inomiririra kambani muTehran kuti vakanzwa nenzeve dzavo ruzivo urwu rwekutaurirana kwevashandi nevatongi vemumigwagwa, pakafambiswa kutaurirana nevatongi vemotokari, sechikamu chekuferefeta, isu zvirokwazvo akaona zvechokwadi kuti tanga tiri pachokwadi. Ndokunge, taigona kunge tisinganzwe ndege yedu. Ndege yedu yakanzwikwa nendege yeTehran. Isu takave nechokwadi chekuti nhaurirano nenhandare yakaitiswa kusvika kune yechipiri yekupedzisira yechiitiko. Kusvikira yechipiri yekupedzisira. Mvumo yakapihwa iyo nzira; mvumo yakapihwa yekuchinjana, zvichingodaro. Saka zvese izvi zviri mumafaira ekutsvaga izvozvi. Uye zvinyorwa zvese izvi zvinogona kunge zvichizowanikwa nekufamba kwenguva. ”
[00:28:30 - mubvunzo kubva kune vateereri:] "Ndeupi waive wekupedzisira meseji?"
[00:28:31 - Dykhne:] "Tarisai, ini handikwanise kutaura pane ese mazwi muhurukuro yevatyairi nekuti isu hatina chero humbowo hwecheti. Tine mazwi evashandi vedu vatatu. Uye zvakare, isu tine chivimbo nekutendeseka kwavo uye kururamisa kwavo mune iyi nyaya. Ihor, ungada kuwedzera chimwe chinhu? ”
[00:29:20 - Sosnovsky:] "Ini ndanga ndichida kungo wedzera kuti: Mashoko acho ari, kutaura zvazviri, chirevo chepasi:" uyezve, wana kukwirira uye tendeuka. ' Vakapindura 'wana kukwirira uye tendeuka.' Ndizvozvo. Zvinoreva kuti pangadai pasina kumwe kutaurirana mushure meizvozvo, chete kana chimwe chinhu chikaputsika. Hakuna imwe nzira. ”
"[00:29:30 - mubvunzo kubva kumutori wenhau:]" Mhoroi. Arman Nazaryan, Kyiv TV Chiteshi. Mamiriro acho akaoma. Neraki, zvirinani tinoziva kuti ndiani aive nemhosva.
Ivo pachavo vakazvibvuma. Ndiri kutaura izvi nekuti ini handidi kuti mubvunzo wangu unzwike sekufungidzira kwemhando ipi neipi yemhosva pachikamu cheUkraine. Isu tese tinonzwisisa, hongu, zvakaitika. Nekudaro, isu tiri kutaura nezvekufa kwevanhu, nezvedambudziko.
Naizvozvo, ini handigoni asi kusimudza iyi nyaya. Kambani yako yave nyajambwa wezisarudzo, kune imwe nhanho, yevatungamiriri vezvematongerwo enyika. Wese munhu aiziva nezvekupokana muIran, handiti? MaAmerican vaiziva kuti njodzi yakadai yaiuya; Iran zvechokwadi yaiziva izvozvo kune imwe nhanho. Ukraine, ndine chokwadi, yaive ichizivawo izvo - kuti Iran haina kuchengetedzeka.
Tiudze, haufunge here kuti Mutungamiri weUkraine Volodymyr Zelensky uye Ministry of Foreign Affairs yeUkraine vane basa rekusasarudza kurambidza, semuenzaniso, kubva kana kuenda nendege kuenda kuUkraine? Ndatenda."
[00:30:20 - Dykhne anopindura:] "Maonero angu ega. Ini ndinotenda kuti veUkraine zviremera zvehurumende vakaita nemitemo.
Pane ruzivo rwakakwana kuti hazvibvumirwe kubhururuka kuenda kunzvimbo ino, sekufunga kwako, uye izvi zvinosimbiswa nezvakaratidzirwa naIhor pane masiraidhi.
Ndege dzinobva kumativi ese epasi dzakabhururuka ipapo pamberi pedu uye dziri kubhururuka ipapo shure kwedu. Nehurombo, tinogona kutaura kuti ndege yedu yaive munzvimbo isiri iyo panguva isiriyo. Iyi inogona kuve yaive chero imwe ndege yaive ichishanda panguva iyoyo kuTehran airport.
Vhura iyo Flight Radar app uye iwe uchaona kuti iyo airspace pamusoro peTehran yakavhurika. Ndege dzese dzinoshanda ipapo dziri kubhururuka ipapo izvozvi. Naizvozvo, ichi chaisave chisarudzo cheumwe neumwe. Iko kune yakasimbiswa yepasirese tsika yekumisikidza izvi. Pakutanga, zvinotsanangurwa nenyika iyo inogadzirisa nzvimbo yemhepo.
Kana isu tikataura nezve nguva uye ndiani angadai akaziva kubva kune vezvenhau kuti chii chaiitika ipapo, isu hatina kuziva zvechokwadi. Ini ndinofunga kuti vazhinji, vanhu vazhinji muUkraine havana kuziva kuti chii chaiitika ipapo. Paive neruzivo nezve kurwiswa kwenzvimbo dzeUS muIraq. Nekudaro, ndiani aiziva chii, kubva kupi uye sei? Ndiri kureva, kubhururuka kwevagari hakunei nezvose izvi uye haina chekuita nemutemo. Saka ini, aya maonero angu, handifunge kuti imhosva yehurumende, ndoda yedu. ”
[00:32:50 - mubvunzo muUkraine] [00:33:20 - Dykhne anopindura:] "Zvakandiomera kuti nditaure pamusoro peizvi nekuda kwezvikonzero zviviri. Kutanga, vanhu vedu havasi ivo chete nhengo dzechikwata chedu, asiwo vamwe vanhu makumi mana nevaviri vanobva kuUkraine. Kusvikira vadzokera kuUkraine, isu ticharega kutaura nezve kuferefetwa kuri kuitika. Nezvikonzero zviri pachena kwauri, ndinovimba.
Isu, zvechokwadi, tinogamuchira ruzivo kubva kuvanhu vedu. Ichi ndicho chikonzero ivo vanotora chikamu mubasa rekomisheni iyi. Isu tinonyatso cherekedza isu pachedu zvese zvisinganzwisisike zvinhu uye kutsauka mune iro basa rekomisheni iyi. Asi hatichazotauri nezvazvo izvozvi. ”
"Panyaya yekudzoserwa kwemitumbi yevakapunzika kumhuri dzavo. Mitumbi iri muzvipatara zvina zvakasiyana. Zvinoenderana neruzivo rwangu, kusvika parizvino, nyanzvi dzekurapa hadzina maturusi anodiwa nemidziyo. Ivo vanobva kuIran, uye hama dzavo dziriko. IUkraine Ministry yekune dzimwe nyika iri kuedza napose painogona napo kuunza mitumbi yevafi vekuUkraine vadzokere kuUkraine. Uye zvakare, pane tariro yekuti vachadzoka pamwe nendege yekutakura yakaunza komisheni uye iriko kuIran.
Iyi ndege yekutakura zvinhu, ine hunyanzvi, asi hatizive kuti Iran ichave yakagadzirira sei kupedzisa hurongwa, zvinhu zvehurongwa, kuti zvichatora nguva yakareba sei. Neraki, ino inguva yekutanga isu kusangana nemamiriro ezvinhu aya. Pamusoro pezvo, ruzivo rwezvimwe zviitiko zverudzi urwu hazvina kufanana kuti isu tigone kutora mhedzisiro uye toti kana zvirizvo, saka saka. Nyika yega yega ine nzira yayo, uye Iran inyika yakaoma. ”
[00:36:30 - Sosnovsky:] "Maererano nemitemo yekuferefeta yakataurwa neICAO, bato rinoita kuferefetwa, mune iyi nyaya, nyika kwayakaitika, Iran, inofanirwa kuendesa imwezve ripoti mukati memazuva makumi matatu. Ndokunge, kutaura chete, mukati memwedzi, na8 Kukadzi. ”
[00:37:09 - mubvunzo muChirungu, uyo unobva washandurirwa muchiUkraine:] Mutori wenhau kubva kuCNN - "Zvinonzwika sekunge wakanyatsojekesa kuti vakuru veUkraine nevakuru veIran vakatadza kuyambira yendege nezvengozi ingangoitika mudenga saka nei uchifanira kuvimba kuti ivo vanozoita zvirinani mune ramangwana? Iko hakuna here kusungirwa kwendege kuti iite yayo yega tsvagiridzo kana kunyange kutevera midhiya mishumo yekuti pangave nenjodzi kana yazvino maairstrikes munzvimbo yakapihwa? Ipapo kamwe kamwe Mutungamiriri anoita yambiro yakajeka yekuti anotarisira muripo kubva kuIran. Kana Iran ikasabhadhara, kambani yendege ichapa mhuri dzevatakurwi muripo here? ”
[00:35:15 - Dykhne:] "Tinovimba nhepfenyuro dzenyika dzevamiriri vezvemabhizimisi Aya ndiwo masangano epasirese epasi rese munyika dzese. Ivo vanotevera iwo iwo iwo mirawo. MuUkraine, muIran, muEurope, muUnited States. Naizvozvo, hatigone kubvunza zvinoitwa nemitumbi iyi kudzamara masangano epasirese abvunza zvavanoita.
“Saka ndege iyi irikushandawo sezvairi kare, zvinoenderana nemitemo yenyika. Kana iri yekubhadhara: ndinonzwisisa kuti Mutungamiriri anga achitaura nezvekutaurirana kwehukama pane iyi nyaya, umo ndege yendege ingangove isiriyo nyaya. Ehe, isu tinotsigira chinzvimbo cheMutungamiri wedu.
Yese imwe muripo, inishuwarenzi inobhadharwa, inotsanangurwa nemutemo, rinova basa rekambani yendege, ichaitwa zvinoenderana nemitemo yenyika dzese nezvibvumirano zveinishuwarenzi zviripo. Uye isu tinotora iyi nyaya nemutoro wakakomba; tinoziva mutoro wedu kune vanofamba.
Tichaitevedzera zvizere. ”
[00:40:10 - Sosnovsky muChirungu:] "Ndiri kuda kuwedzera kumhinduro iyi kana uchida - Mhoro? Ndiri kungoda kuwedzera chimwe chinhu kumubvunzo iwe wabvunza. Mhinduro yakadai. Tinovimba nehurumende yeIran, ndosaka takarega kubhururuka. ” [CNN mutori wenhau achibvunza kuti:] "
Sei uchifanira kuvimba navo mune ramangwana, nei… ”[Sosnovsky muChirungu anoenderera mberi, achidimbudzira munhu akabvunza kuti:]" Hapana kutaurwa nezveramangwana, takarega kubhururuka. Takamira kubhururuka pamusoro penharaunda yeIran… Takamira kubhururuka kuenda kuIran panguva ino, nedzimwe nzira dzese, ngatitii Dubai, takachinja nzira, uye hatibhururuke pamusoro penyika yeIran. Saka tichataura nezvekuvimba mune ramangwana. ”
[CNN mutori wenhau achibvunza kuti:] "Maitiro ako anofanira kuchinja here?"
[Sosnovsky muChirungu anoenderera mberi, achivhiringidza uyo aibvunza:] "Zvakachinja kare… zvakachinja kare… zvakachinja kare…"
[Mutori wenhau weCNN achibvunza kuti:] "Iwe waifanira kunge wakamboita tsvagiridzo iwe yaunoziva, kunyangwe uchitevera mashumo enhau nezvekuratidzira kwemastile munzvimbo iyi?"
[Sosnovsky muChirungu:] "Tichazviita zvechokwadi, asi kuti tiite izvozvo tinofanirwa kuongorora njodzi, tichazviita zvechokwadi."
[CNN mutori wenhau achibvunza:]
"Asi ungadai wakaita zvinhu nenzira imwecheteyo kana uchikwanisa kuzviita zvakare, nezvinhu zvese zvaunoziva?" [Sosnovsky muChirungu:] "Zvakakosha izvo zvatinofanira kuita, tichazviita."
[Mutori wenhau weCNN achibvunza kuti:] "Ndiri kubvunza kana chingave chisarudzo chakafanana kubhururuka nhasi, tichipa mamiriro akafanana?"
[Sosnovsky muChirungu:] "Sezvo imi muchiona zvandiri kutaura nezvazvo. Takamira kubhururuka kuenda kuIran zvichibva nekuvimba kwedu mavari. "Ndinofunga iyi ndiyo mhinduro nekuti tachinja mutemo."
[00:41:40 - mubvunzo muUkraine] [00:41:41 - Dykhne anopindura:]
“Makangonzwa zvakataurwa naVice President veFlight Operations. Iye anga achingo ratidza edu ese akajairwa enhoroondo nzira. Kubhururuka uku kwaive mukati megadziriro yenzira dzedu dzekare, uye pakanga pasina kutsauka.
Zvakare, kana traffic yekumhanya yakatemwa, kutanga pane zvese, munzvimbo yendege, idzi nzira dzekusvika uye dzekuenda dzinoonekwa neTehran airport uye yakatumirwa mune yakasarudzika system. Ndokunge, pane dzimwe nzira dzinoitirwa nendege.
Uye kutiza kwedu yaive imwe yenzira dzakatemwa nendege uye yakashanda mukati mechinhanho chemirairo yakagamuchirwa kubva kumutyairi wetraffic, yatichangobva kukurukura. Paive nekubatana, pakanga paine kutaurirana necontroller, mutyairi aipa raira maitiro ekuenderera munzira iyi mirairo yakajairika iyo ingangofanana kune imwe neimwe yekutora kubva kuTehran.
Saka pangadai pasina kuve nekufungidzira zvine chekuita nekuchinja kwenzira. Ndatenda."
[00:43:27 - mubvunzo kubva kune vateereri, zvisingaenzaniswi, ipapo muparidzi anoti:] "Ndine urombo, muturikiri haakwanise kukunzwa iwe uye vamwe vako havanzwe iwe. Saka ndokumbirawo usimudze maoko ako pamberi, hapana chikonzero chekudaidzira. Ndapota… Zvakanaka, ndiri kukupa maikorofoni izvozvi. ”
[00:43:46 - Sosnovsky:] "Ndakazvinzwa zvakadaro. Ndinofunga ndichapindura usati wataura. Handina kodzero yekutaura zvavataura. Parizvino. Hazvina kunaka, hazvina kunaka. Mira zvishoma. Kungoti inyaya yekuongorora, handina mvumo yekutaura. "Ini ndangopindura murume uyu kuti paive nemutsetse wakajairika wekusimuka uye kusiya nzvimbo yenhandare yendege, zvinova zvakaitwa nevanyori tsamba iyi."
[00:44:14 - mutori wenhau:] "Iran inoratidza kuti ndege yakachinja nzira, ndosaka…"
[00:44:16 - Sosnovsky:] "Zvakare, kuti ndege yakachinja nzira, tinogona kuiona pane yedu Flight Radar app. Unozviona paApp Flight Radar. ”
[00:44:16 - mumwe munhu kubva kune vateereri:]
"Ichi hachisi chokwadi!"
[00:44:19 - mutori wenhau anoongorora mubvunzo wake:] "Ndiri kukumbira mhinduro; vari kureva kuti kosi yacho yachinjwa, saka vapfura ndege pasi. ”
“Ndapota teererai mufananidzo zvakare, ndinokukumbirisai.
Iyo yakajairwa kubuda kubva kuTehran nhandare yendege ndeye 7,000 tsoka munzira yakatwasuka. Mushure mekuyambuka kukwirira kwemamirioni matanhatu, kazhinji, muIran, vanokupa kosi kune imwe nhanho. Kana iwe ukatarisa pane ese apfuura zvirongwa, zvagara zvakaita seizvi kwemakore mashanu.
Iri zano harina kusiyana kubva kune ese apfuura. Mushure mekuyambuka tsoka zviuru zvitanhatu, ndege yakatendeukira kwakanangana nenzvimbo inoenderana yekubuda ichienda kunzira. [Muratidziri anotanga kutaura, asi Sosnovsky anomudimburira.] Kana muchida munogona kutarisa zvakare pamufananidzo, wekare, nekuchinjana kwedu kwese.
Iyi inguva yedu yekutendeuka, kutanga musi wa2 Mbudzi 2019. ”
[00:45:01 - mubvunzo kubva kune vateereri:] "Saka maIran marepoti haana kusimbiswa, kosi haina kuchinjwa?"
[00:45:08 - Sosnovsky:] "Handina kutaura izvozvo. Ndine hurombo. Handina kutaura kuti kosi haina kuchinjwa. Kune zvimwe zvinhu zvisati zvasimbiswa. Kwete. Ini ndakati hazvina kusimbiswa kubva pakutanga kuti zvirevo zveIran zvaireva kune vezvenhau vese… kuti vashandi havana kumbobvira vaonana kubva pavakasimuka. Chokwadi, ichokwadi. ”
[00:45:28 - mubvunzo kubva kuvateereri:] "Saka ko kosi yakachinjwa here kana kuti kwete?"
[00:45:29 - Sosnovsky:] "Imwezve nguva. Iwe unogona kuona kuti iyo kosi yakashandurwa. Chashandurwa madhigirii gumi nemashanu kurudyi, kwachinofanira kuenda, zvinoenderana nemurairo wecontroller. ”
[00:46:08 - Dykhne anopindura:] "Ave mazuva matatu, saka hatigone kuongorora kutengesa kwedu. Zvakadii, zvine hasha kutaura, kuvimba kwevafambi vedu kungangodaro kwakazungunuswa. Ini ndinofunga kuti yanhasi meseji kubva kuvakuru veIran vanofanirwa kusimbisa kuti tiri pachokwadi nezve kuchengetedzeka kwendege dzedu. Uye ini ndinovimba kuti vafambi vacharamba vaine kuvimba kwakakwana matiri.
Panyaya yekugona kuripwa, ini handina kugadzirira kukurukura nezvenyaya iyi izvozvi. Idzi inyaya dzepamutemo, dzinozogadziriswa mukuteedzana kwekutaurirana nezviremera zvehurumende zveUkraine. Kwete nekambani yacho pachayo. ”
[00:48:14 - mubvunzo:] "Ungatiudzawo here, iwe wakataura kuti wanga uchironga ku… zvakanaka, kuti pane tariro yekuti mitumbi inogona kudzoswa nendege inotakura zvinhu? Ichave iyo yese mitumbi kana ingori mitumbi yevakabatwa neUkraine? "
[00:48:29 - Dykhne:] "Handigoni kukuudza kuti zvichave sei. Ini hangu handizive. Ndiri kureva, handizive kuti sei… izvo zvichaitwa nekomisheni imomo…
Ndinoreva, zvichasarudzwa ipapo. MuIran. Ndinoziva kuti ndicho chaive chinangwa chekutanga. Yakanga iri pane iyo hwaro iyo ndege yekutakura yakatumirwa ikoko. Uye kune tariro, kana ruzivo rwese rwakagadziriswa nekukurumidza uye Iran yakagadzirira kupa miviri yevakaurayiwa, Ukraine yakagadzirira kuitora.
Kana ndege yekutakura zvinhu yekuUkraine ikaunza mitumbi yese kuUkraine, sekambani yendege takagadzirira kuiendesa kumaguta iwayo uko kune hama dzevakabatwa kubva kuKyiv. ”
Dzvanya kurodha pasi sePDF